China Stainless simbi grit fekitari uye vagadziri | TAA
* Inogona kushandiswa kutsiva akasiyana siyana emamineral sands & asiri-esimbi abrasives, senge corundum, silicon carbide, arenaceous quartz, girazi marozari, nezvimwe.
* Yakadzika guruva choutsi, kugadzirisa mashandiro enharaunda, zvakatipoteredza zvine hushamwari.
* Inogona kutsiva chikamu cheyekunhonga maitiro.
* Yakadzika guruva kuburitsa uye yakanakisa yekushandira nharaunda, ichideredza kurapwa kwekunhonga tsvina.
* Yakadzika yakazara mutengo, hupenyu hwebasa iri makumi masere kusvika zana ezviuru nguva yeasina-esimbi hasha senge corundum.
* Inogona Kushandiswa kuMakina Akasiyana-siyana: makamuri ekuputika uye makabhodhi ekuputika pamwe nemuma centrifugal vhiri blast michina.
* Blasting masisitimu: ese maviri Pressure kuputika system, isina mweya blast-yekuchenesa michina inoshanda.
Kuwandisa: ＞ 7.0g / cm3
* Pamusoro kupedzisa kwezvinhu zvisina-ferrous
* Kugadzirira kwepamusoro usati wapenda kana kupfeka
* Kubviswa kweceramic kubva kune investment castings
* Kuburitsa kweasina-ferrous kupisa kurapa zvikamu
* Kuchenesa kwemajoini akasunganidzwa
* Etching yemapurasitiki zvikamu zvisati zvaitika
* Anchor profiling yepende uye poda jasi kunamatira
Pashure: Stainless simbi yakatemwa waya kupfura
Zvadaro: Yakadzika Carbon Simbi Yakapfura
Kanda isina simbi Grit
Grit nenyunje Stainless Steel
Grit nenyunje Stainless Steel Pfuti
Stainless Simbi Grit Blast Midhiya
Stainless Simbi Grit nenyunje
Stainless Simbi Grit G18
Stainless Simbi Grit G25
Stainless Simbi Grit G40
Stainless Simbi Grit G50
Stainless Simbi Grit G80
Stainless Simbi Grit Zvinoreva
Stainless Simbi Grit Midhiya
Stainless Simbi Grit Sandblasting
Stainless Simbi Grit Saizi
Stainless Simbi Pena grit
Sponge midhiya hasha iboka rehasha midhiya ine urethane chipanje sekunamatira, iyo inosanganisa iko kugona kugona kweiyo urethane chipanje pamwe nekuchenesa uye kucheka simba retsika kuputika midhiya. Iyo inobhururuka panguva yekukanganisa, ichifumura mabrasives kumusoro nehumwe uye chimiro chakagadzirwa. Kana ichisiya pamusoro, chipanje chinowedzera kudzoka kune yakajairwa saizi kugadzira vacuum iyo inobata yakawanda yezvinhu zvinosvibisa, uye nekudaro inovandudza sa ...
Yakagadzirwa kubva kumusoro giredhi zinc waya, inogadzirwa nekucheka zinc waya mu pellets, iyo yakareba yakaenzana nehupamhi hwetambo. Zinc Kucheka Waya inowanikwawo mune yakagadziriswa fomu iyo inoshandiswa seyakareba nzira yekukanda zinc kupfura. Izvi zvakakosha pakupwanya uye kupedzisa kufa kwekukanda, kazhinji mumavhiri ekuputika michina. Inowanikwa pamitengo inokwanisika, zvigadzirwa zvedu zvinoderedza kupfeka uye kubvarura pamidziyo yekufema ichienzaniswa nemamwe akawanda esimbi abrasives. ...
Stainless simbi yakatemwa waya kupfura inoshandiswa zvakanyanya kupfura / mweya kuputika kwemhando dzakasiyana dzeasina-ferrous simbi castings, simbi dzesimbi zvigadzirwa, aruminiyamu zvikamu, zvishandiso zvematombo, matombo echisikigo, nezvimwewo, kuratidza iyo simbi vara uye kuwana yakatsetseka, isina ngura-isina. , mat kupedzisa pamusoro pekurapa maitiro. Iine mhando yakanaka yesimbi isina simbi waya mbishi, simbi isina simbi yakapfurwa inoratidzirwa neyunifomu zvikamu uye neukukutu, izvo zvinovimbisa hupenyu hwayo hwakareba hwebasa uye zvakanaka ...
Zvimiro ■ Yakadzika Guruva-- Iyo yakadzika yemukati kusimba uye chikamu chakakura chechinhu icho pachacho chinomhanyisa mwero wekugadzirisa uye zvakanyanya kudzora kuburitsa guruva uye guruva rinouya kubva kune yekushandira, ichideredza kuchenesa kuyedza sandblasting, kudzikisira kusvibiswa kwenzvimbo yebasa. ■ Yakanakisa Surface Yemhando --- Inogona kudzika mukati memabhaidhi uye zvikamu zvisina kuenzana kuchenesa, nokudaro kubvisa zvachose ngura, munyu unonyungudika uye nezvimwe zvinosvibisa; pamusoro blastin ...
Zvimiro zveAlumina oxide hasha zvine huma hwakareba uye yakapinza angular, inoshandiswa zvakanyanya kune nyoro uye yakaoma kuomesa, ichigadzira yakakodzera chimiro chekugadzirira pamusoro. Alumina oxide hasha izano zano rinobvarura hasha midhiya yekugadzirira pamusoro ichikumbira ferrous yemahara. Alumina oxide hasha iri yakakwirira kunyatsoshanda nenyunje abrasives pamwe unopinza micheto uye yakakwirira arambe achirema. Inogadziriswazve uye inogona kushandiswa mumhando dzakasiyana dzedhizaini muchina. ...
Kubatsira ■ kwakachena uye kwakatsetseka, hakukuvadze kune chaiyo michina chaiyo yebasa chidimbu. ■ kukwirira kwechimakanika, kuomarara, kuchinjika ■ inogona kushandiswazve kakati wandei, kuita kumwe chete uye hakuputsike nyore. ■ saizi saizi, mushure mekuvhuvhuta jecha rakakomberedza chishandiso kuchengetedza yunifomu kupenya maitiro, hazvisi nyore kusiya watermark. ■ kuchena kwakakwirira uye mhando yakanaka inosangana neyepasi rose chiyero. ■ kugadzikana kemesitiri pfuma, kwete kusvibisa zvakasangana ...